कोहलीका ५ गल्ती | Hamro Khelkud
कोहलीका ५ गल्ती
आइतवार, वैशाख १४, २०७७
एजेन्सी – भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहली वर्तमान समयका उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान मध्यका एक हुन् । कोहलीले ब्याटिङ र कप्तानी दुवैमा राम्रो गर्दै भारतलाई तीनै शैलीको अब्बल टोली बनाएका छन् । भारत टेष्टमा शीर्ष स्थानमा छ ।
पक्कैपनि काम गर्नेक्रममा गल्ती सबैबाट हुन्छनै । केहि गल्तीले पाठ सिकाउँछ । केहि गल्ती देख्नलाई सामान्य भएपनि मुल्य ठुलो चुकाउनुुपर्छ । त्यस्तै कोहलीले आफ्नो कप्तानीमा लिएका ५ निर्णय, जसको कारण भारतले केहि ठुला अवसर गुमाउँदा केहि खेलमा लज्जास्पद हार बेहोर्नु पर्यो ।
५. चौथो नम्बर ब्याटिङमा अत्याधिक प्रयोग
सन् २०१७ मा च्याम्पियनसिप ट्रफी फाइनलमा पाकिस्तानसँग पराजित भएपछि भारत दुई वर्षपछि हुने एकदिवसिय विश्वकप जित्ने तयारीमा लागेको थियो । तर भारतको चौथो नम्बरको ब्याटिङक्रमले सधैं चिन्ताको विषय बन्यो । चौथो नम्बरमा भारतले अजिंक्या रहाणे, सुरेश रैना, श्रेयस ऐर, दिनेश कात्तिक, महेन्द्र सिंह धोनी, आम्वाती रायुडु, ऋषभ पन्त, विजय शंकर, लोकेश राहुल, मनिष पान्डे र हार्दिक पान्ड्यालाई प्रयोग गरेको थियो ।
अन्य खेलाडीको तुलनामा रायुडुलाई धेरै मौका दिएपनि अन्त्यमा विश्वकपमा अप्रत्यासित रुपमा उनको स्थानमा विजय शंकरलाई समेट्दै टोली घोषणा गरेको थियो । जसले मध्यक्रम कमजोर हुँदा विश्वकप जित्ने सपना अधुरै रह्यो । कोहलीले उक्तक्रममा अत्याधिक ब्याट्सम्यान फेर्नुको सट्टा सुरुवातदेखि नै एक ब्याट्सम्यानलाई मौका दिएको भए मध्यक्रम मजबुत हुन सक्थ्यो । विश्वकप पछि युवा ब्याट्सम्यान श्रेयस ऐर भारतीय टोलीमा चौथो नम्बरको लामो यात्रा गर्ने सम्भावना देखाएका छन् ।
४. च्याम्पियनस ट्रफी फाइनलमा बलिङ गर्ने निर्णय
भारत र पाकिस्तानबीचको खेल विश्वमै महत्त्वका साथ हेरिन्छ । २०१७ को च्याम्पियनसिप ट्रफीमा समुह चरणको खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई १ सय २४ रनले हराएको थियो । तर पाकिस्तान राम्रो पुनरागमन गर्दै फाइनल सम्मको यात्रा गर्न सफल भयो । फाइनलमा ओभल क्रिकेट मैदानमा हुँदै थियो । कोहलीले टस जितेर सबैलाई आश्चर्य पार्दै बलिङ गर्ने निर्णय लिए । प्राय कप्तानहरु ठुला प्रतियोगिताको फाइनलमा कप्तानहरु टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्ने निर्णय लिन्छन् । जसले राम्रो योगफल बनाउँदै विपक्ष्यलाई दबाबमा राख्न सजिलो हुन्छ ।
ओपनर फकार जमानले उत्कृष्ट शतक प्रहार गरेपछि पाकिस्तानले ३ सय ३८ रनको योगफल तयार पारेको थियो । पाकिस्तानको बलियो हतियार आक्रामक बलिङ थियो । फाइनलमा अन्य खेलको तुलनामा दबाब धेरै हुन्छ । अर्को तर्फ फाइनलमा विशाल लक्ष्य पछ्याउन सहज हुँदैन । त्यहि दबाबको कारण भारतीय ब्याट्सम्यान हार्दिक पान्ड्या बाहेक अन्य लामो समय क्रिजमा टिक्न सकेनन् । भारतले १ सय ८० रनको फराकिलो हार बेहोर्न पुग्यो । पहिला ब्याटिङ रोजेको भए नतिजा भारतको पक्ष्यमा जान सक्थ्यो । अर्को पाकिस्तानको मुख्य कमजोरी ब्याटिङ थियो ।
३. न्युजिल्यान्ड टेष्टमा पन्तलाई खेलाउने निर्णय
न्युजिल्यान्डसँगको दुई टेष्ट सिरिजको लागि भारतले दुई विकेटकिपर ऋषभ पन्त र रिद्धीमान शाहका साथ टोली घोषणा गरेको थियो । टेष्टमा प्रर्दशन र अनुभव दुबैको आधारमा पन्त भन्दा शाह छन् । पन्तले गैर जिम्मेवार ब्याटिङको भन्दै भारतले पाँच टि२० सिरिज र तीन ओडिआई सिरिजमा टोली बाहिर राख्दै लोकेश राहुलले विकेटकिपिङ गरेका थिए । तर पन्तलाई कोहलीले दुबै टेष्ट सिरिजमा विकेटकिपरको रुपमा मैदान उतारे । पन्तले दुबै खेलमा ठुलो इनिङ खेल्न सकेनन् । भारतले टेष्ट सिरिजमा क्लिनस्वीप बेहोर्न पुग्यो ।
२. लर्ड्समा दुई स्पिनर खेलाउने निर्णय
इंग्ल्यान्डको लर्ड्स मैदान तुलानात्मक रुपमा तीव्र गतिको बलर उपयोगि मानिन्छ । सन् २०१८ मा इंग्ल्यान्डसँगको दोस्रो टेष्ट खेलमा कोहलीले दुई स्पिनर कुलदीप यादव र रविचन्द्रन आश्विनलाई मैदान उतारे । उता इंग्ल्यान्ड एक मात्र स्पिनर आदिल राशिदको साथ मैदान उतारेपनि बलिङ गराएन । हरियो घाँस भएको उक्त लड्स पिचमा स्पिनर उपयोगी नहुने हुँदा घरेलु टोली इंग्ल्यान्डले सबै तीब्र गतिका बलरलाई बलिङ गराएको थियो । भारतका दुबै स्पिनर यादव र आश्विन विकेटविहीन बनेका थिए । जुन खेलमा भारत १ सय ५९ रनको इनिङ अन्तरले पराजित भएको थियो ।
१. विश्वकपमा धोनीलाई ७ नम्बरमा पठाउने निर्णय
भारत गतवर्ष इंग्ल्यान्डमा सम्पन्न एकदिवसिय विश्वकप सेमिफाइनलमा न्युजिल्यान्डले प्रस्तुत गरेको २ सय ४० रनको लक्ष्य पछ्याउँने क्रममा ४९.३ ओभरमा २ सय २१ रनमा अलआउट भएको थियो । जसक्रममा धोनीको ब्याटिङक्रमलाई लिएर कोहलीको चर्को आलोचना भएको थियो । लक्ष्य पछ्याउँने क्रममा भारत ५–३ को अवस्थामा थियो । जुन समय भारतलाई रन जोड्न भन्दा पनि विकेट बचाउन बढी आवश्यक थियो । जुन समय अनुभवी विकेटकिपर महेन्द्र सिहं धोनीले भारतलाई समाल्दै अघि बढाउन सक्थे ।
धोनीले विकेट बचाउँदै रन जोड्दा तल्लोक्रममा हार्दिक पान्ड्या र ऋषभ पन्तले विना दबाब राम्रो फिनिसिङ सहित जित दिलाउन सक्थे । तर धोनी ७ नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आउँदा खेल भारतको पक्षबाट टाढि सकेको थियो । कोहलीले पन्त, दिनेश कात्तिक र पान्ड्या पछि मात्र धोनीलाई ब्याटिङको लागि पठाएका थिए । सातौं विकेटका लागि रविन्द्र जडेजा र धोनीले १ सय १६ रनको उत्कृष्ट साझेदारी गरेपनि जितको लागि पर्याप्त रहेन ।
धोनीले एकतर्फबाट विकेट बचाएर खेल्दा अर्कोतर्फबाट जडेजाले ५९ बलमा ४ चौका र ४ छक्का सहित ७७ रनको इनिङ खेलेका थिए । चौथो ओभरको तेस्रो बलमा लोकेश राहुल १ रनमा आउट हुँदा धोनीलाई पठाएको भए जडेजा जस्तै पन्त र हार्दिकलाई खेल्न सहज हुन्थ्यो र नतिजा भारतको पक्षमा जान सक्थ्यो ।